Iindaba - Ukupakishwa kokutya okunjalo kushushu kakhulu!Uluhlu olukhulu lweenzuzo zeVacuum Skin Packaging
Ukupakishwa kokutya okunjalo kushushu kakhulu!Uluhlu olukhulu lweenzuzo zeVacuum Skin Packaging
Umzimba-uncamathiseleukupakishwa kwevacuum enezithintelo eziphezulu, ikwimeko yevacuum iya kutywinwa phakathi kwefilimu ebonakalayo kunye netreyi.Inokugcina umbala, incasa kunye nokutsha kwemveliso, kwaye inomboniso ongcono we-dimensional emithathu yokupakishwa kwesitikha kunye neempembelelo ezimbini zokhuseleko lokugcinwa kwevacuum.
Ukupakishwa kweVacuum Skin kunokusetyenziswa ngokubanzi kwinyama yenkomo ekrwada, ukutya kwaselwandle okutsha, intlanzi yaselwandle entsha, inyama yenyama entsha, imilenze yenkukhu entsha, intamo entsha yedada, amaqhekeza entlanzi amatsha, ishrimps entsha, ityhuna, ishellfish entsha kunye nezinye iimveliso zenyama ekrwada, kunye nerosti. idada, inkukhu eqhotsiweyo, inyama ephekiweyo, imilenze yenkukhu kunye nezinye iimveliso zenyama ephekiweyo, iimpawu zayo zilandelayo.
1.Vacuum kwipakethe etywinwe ngokupheleleyo, enokugcina ubutsha bendalo, ivumba, umbala kunye nencasa yejusi yeemveliso.
2. Ukupakishwa kwe-vacuum yesithintelo esiphakamileyo, esinokuvala i-oksijini, inqanda ukuveliswa kweebhaktheriya kwindawo yokushisa ephantsi, igcine ukutsha kunye nokukhusela umbala wendalo weemveliso ixesha elide.
3. Inokuthintela iikristale ze-ice ukuba ziveliswe ngexesha lefriji kunye nokuthintela umphezulu wemveliso ukuba umile kwaye uqhekeke ngenxa yokutshisa okukhenkcezayo.
Ukusetyenziswa kunye nokusebenza kweukupakishwa kwevacuum.
Izicelo eziqhelekileyo: inyama entsha, ukutya kwaselwandle, ushizi, inyama ecoliweyo, iinkukhu eziphezulu, njl.
Ubukhulu obuqhelekileyo: 80μm-200μm.
Ukusebenza okuqhelekileyo: Isiphumo esihle sokulalisa.
Iileya ezahlukeneyo zokutywinwa kobushushu ziyilelwe iibhokisi zokutsala ezahlukeneyo.
I-oksijeni efanelekileyo kunye nomqobo we-vaporizer yamanzi unokukhethwa ngokwemixholo.
Ukupakishwa ngokubanzi kuya kubonisa iimpahla ezipakishwe ngokugqibeleleyo ngelixa zibonelela ubomi obude beshelufu kunopakisho oluqhelekileyo.
Ukupakisha iimpawu zefilimu.
Ukungafihli kakuhle: umboniso olungileyo obonakalayo emva kokupakishwa, ukuqina okuhle, unokumelana nokuphathwa kunye nobushushu obukhethekileyo obuphantsi.
Ukwandiswa okulungileyo: i-thermoforming yobushushu obuphantsi, ukuphucula ukusebenza kakuhle kokupakisha kunye nokugcina amandla.
Iimveliso zomgangatho wokutya ezihambelana nokusingqongileyo, akukho ngcoliseko lokusingqongileyo kunye neengozi zempilo.
Akukho vumba eliyingozi xa upakisha.
Ikhono eligqwesileyo lokuchasa ukuguga kunye nexesha elide lokugcina.
Ifilimu yokupakisha yebakala lokutya, ngokuhambelana nemimiselo ye-FDA yase-US, izinto zokupakisha ze-ROHS eziluhlaza.
I-Adhesive, akukho glu ebhodini, gcina inkqubo kunye neendleko.
Ukunamathela ngokugqwesileyo kumaphepha okuqinisekisa isiphumo sokupakisha.
Ukuchasana okugqwesileyo kumafutha kunye neoli.
Nayiphi na imilo kunye nendalo yeemveliso zinokupakishwa.
Ixesha lokuposa: Dec-03-2021
I-Beitou Industrial Park, iNombolo ye-10 ye-Keji Avenue, iSixeko saseYixing, kwiPhondo laseJiangsu
Ifowuni: +86 18261589258